“ My Country My Home” ရုပ်ရှင်“ My Country My Home” ရုပျရှငျ | wafulu
“ My Country My Home” ရုပ်ရှင်“ My Country My Home” ရုပျရှငျ
သြဂုတ်လ ၇ရက်, ၂၁၀၇မှာ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ NHK broadcasting stationနဲ့ မြန်မာမှ MNTVတို့မှရန်ကုန်မြို့မှာ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်. နှစ်ဦးနှစ်ဘက်သဘောတူညီမှုဖြင့် “ My Country My Home” ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်မယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်.
နောက်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီ တွင် ပြသပါမယ်.
မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးနေထိုင်တဲ့” Takadanobaba” မှာနေထိုင်ကြီးပြင်းလာတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်” Nan” ကအဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်. “ Nan” ဟာမိမိကိုယ်ကို ဂျပန်လူမျိူးလို့ထင်ပြီး နေထိုင်လာခဲ့ရာမှ တနေ့မှာ ဖခင်ဖြစ်သူမှ မြန်မာလူမျိူးဖြစ်ကြောင်းအသိပေးခံရပြီး စိတ်မချမ်းမြေ့စွာဖြင့် ကြီးပြင်းသွားရပါတယ်.
မြန်မာပြည်မှ Top Star ဝတ်မှုံရွှေရည်မှ အဓိကသရုပ်ဆောင်ပြီး ဂျပန်ရဲ့တေးဂီတအဖွဲ့” Prizmax” မှာသရုပ်ဆောင်တဲ့ မြန်မာပြည်ပွား Morisaki Win sanလဲသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်.
ဂျပန်မှာလူသိများတဲ့ tourist destinationsနေရာတွေလဲ အများကြီးပါဝင်မယ့်
သွဂုတျလ ၇ရကျ, ၂၁၀၇မှာ ဂပြနျမှာရှိတဲ့ NHK broadcasting stationနဲ့ မွနျမာမှ MNTVတို့မှရနျကုနျမွို့မှာ ဆှေးနှေးပှဲပွုလုပျခဲ့ပါတယျ. နှဈဦးနှဈဘကျသဘောတူညီမှုဖွငျ့ “ My Country My Home” ဆိုတဲ့ရုပျရှငျကိုထုတျလုပျမယျလို့ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ.
နောကျနှဈဖဖေျောဝါရီ တှငျ ပွသပါမယျ.
မွနျမာလူမြိုးတှအေမြားကွီးနထေိုငျတဲ့” Takadanobaba” မှာနထေိုငျကွီးပွငျးလာတဲ့ အထကျတနျးကြောငျးသူ မွနျမာအမြိုးသမီးငယျ” Nan” ကအဓိကဇာတျဆောငျဖွဈပါတယျ. “ Nan” ဟာမိမိကိုယျကို ဂပြနျလူမြိူးလို့ထငျပွီး နထေိုငျလာခဲ့ရာမှ တနမှေ့ာ ဖခငျဖွဈသူမှ မွနျမာလူမြိူးဖွဈကွောငျးအသိပေးခံရပွီး စိတျမခမျြးမွစှေ့ာဖွငျ့
မွနျမာပွညျမှ Top Star ဝတျမှုံရှရေညျမှ အဓိကသရုပျဆောငျပွီး ဂပြနျရဲ့တေးဂီတအဖှဲ့” Prizmax” မှာသရုပျဆောငျတဲ့ မွနျမာပွညျပှား Morisaki Win sanလဲသရုပျဆောငျထားပါတယျ.
ဂပြနျမှာလူသိမြားတဲ့ tourist destinationsနရောတှလေဲ အမြားကွီးပါဝငျမယျ့
On August 7, 2017, MNTV in Myanmar vand NHK broadcasting stations in Japan heldapress conference in Yangon.
The two companies announced jointly to produceamovie “ My Country My Home” .
It will be screened in Myanmar next February.
It isastory of the Myanmar girls high school student Nan who grew up at Takadanobaba of Japan where Myanmar people livealot.
Nan believed himself asaJapanese and lived there. However, one day she will be told that her father isaMyanmar person and grow up while worrying.
Myanmar’s top actress Wimong Shoei will star, Miyazaki Winn who is from Myanmar who is active in the Japanese music group “ Prizmax” will also appear.
Many popular tourist destinations in Japan are also scheduled to appear. It is pleasure.
« ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးဂျပန်နိုင်ငံတွင်နျူကလီးယားဗုံးပေါက်ကွဲတဲ့（the explosion of an atomic bomb） နေ့ကမ်ဘာပျေါမှာပထမဦးဆုံးဂပြနျနိုငျငံတှငျနြူကလီးယားဗုံးပေါကျကှဲတဲ့（theexplosion of an atomic bomb）နေ့